येशूको प्रलोभनको — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
येशूले, पवित्र आत्माको पूर्ण, यर्दन फर्केको र मरुभूमिमा आत्मा नेतृत्व थियो, जहाँ चालीस दिनको लागि उहाँले शैतानको प्रलोभनमा थियो. उहाँले ती दिनमा केही खाए, र तिनीहरूलाई को अन्त मा त्यो भोक थियो.
पहिलो, जहाँ हामी Luke's सुसमाचार मा आफूलाई पाउन ठ्याक्कै छलफल गर्न अनुमति दिन्छ. एक सानो पहिले, अध्याय तीन मा, यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने येशू र बप्तिस्मा अरूको प्रचार छ, र येशू आफैले उहाँबाट बप्तिस्मा गर्न आउँछ. यूहन्ना मानिसहरूलाई धेरै बप्तिस्मा गरिएको छ, तर जब येशू कुरा बप्तिस्मा फरक हुन्छ. पवित्र आत्मा एक ढुकुरले जस्तै शारीरिक रूपमा उहाँलाई मा उतरती; र एक आवाज आकाश भनाइ आउँछ, "तपाईं मेरो प्यारो पुत्र हुनुहुन्छ; तपाईं संग म त्यसैले यहाँ राम्रो खुसी छु। "हामी परमेश्वरको येशूले एक मात्र अगमवक्ता भन्दा बढी हुन घोषणा गरेको छ, बस एक मसीह भन्दा बढी; येशूले परमेश्वरको धेरै पुत्र हुनुहुन्छ.
परमेश्वरले यो घोषणा बारेमा बताउन पछि, र हामीलाई बताउन अघि परमेश्वरको बप्तिस्मा पुत्र के गर्नेछ, जस्तै हामीलाई वंशावली दिन्छ, Jesus' वंश बारेमा बताउन. यो वंशावली आदम फिर्ता सबै बाटो जान्छ. त्यसैले यहाँ हामी प्रभु येशू छ, जसले मात्र परमेश्वरको ईश्वरीय पुत्र हुनुहुन्छ, तर उहाँले पनि आदम को सन्तान छ, पहिलो मानिस. येशूले अद्वितीय छ. येशूले परमेश्वरको मानिस छ.
त्यसैले, हामी प्रलोभनमा प्रतिक्रिया कसरी सिक्न मा हेर्न गर्ने राम्रो? हामी यी दुई पद हेर्न रूपमा, हामी प्रलोभनको सामना गर्दा हामी सम्झनुपर्छ तीन कुराहरू हेर्न जाँदैछन्.
म. परमेश्वरको अनुमति दिन्छ र उहाँको योजना को भाग रूपमा प्रलोभनमा प्रयोग गर्छ (1-2एक)
येशूले, पवित्र आत्माको पूर्ण, यर्दन फर्केको र मरुभूमिमा आत्मा नेतृत्व थियो, जहाँ चालीस दिनको लागि उहाँले शैतानको प्रलोभनमा थियो.
त्यसैले येशूको बप्तिस्मा निम्न, जहाँ परमेश्वरको पुत्र पिताको राम्रो खुसी थियो कोसँग घोषणा भएको थियो, तपाईं परमेश्वरको आत्मा दुष्ट राजा हेरोद dethrone येशूले नेतृत्व भनेर आशा सक्छ, या शायद संकेत चिन्हहरू प्रचार र गरिरहेको को आफ्नो सेवाको सुरु सीधा उहाँलाई पठाउन. तर that's छैन जहाँ पवित्र आत्मा उहाँलाई जान्छ. बरु पवित्र आत्मा मरुभूमिमा उहाँलाई जान्छ. पवित्र आत्मा शैतानको उहाँलाई लोभ्याउन हुनेछ जहाँ धेरै ठाउँमा उहाँलाई जान्छ.
अब सार्वभौम पक्कै, पवित्र आत्मा प्रेरित थियो भन्ने नै तरिकामा - सबै-थाह पवित्र आत्मा उहाँले शैतानलाई उहाँलाई लोभ्याउन हुनेछ जहाँ धेरै ठाउँमा येशूले अग्रणी छ थाह 20, उहाँले पावललाई यरूशलेममा प्रमुख थियो, र सताइएको कि हुनेछ हुन र त्यहाँ कैद. उहाँलाई अघि छ भन्ने खतरा पावलले यसो भन्छ, उनी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छ भन्ने जान पावलले अझै समेट्छ. यो अवस्था भिन्न छैन. पवित्र आत्मा येशूले सामना कि हुनेछ र शैतानको द्वारा चुनौती थाह, अहिलेसम्म उहाँले जसरी त्यहाँ उहाँलाई जान्छ.
किन पवित्र आत्मा त्यो कहाँ परीक्षा हुनेछ मरुभूमिमा येशूले पठाउन हुनेछ? God's घोषणा प्रकाश मा येशूले परमेश्वरको खुसी र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर, र Luke's वंशावली येशूले देखाउँछ कि साथै आदम को छोरा हुन, येशूले प्रमाणित गर्न लागि यो प्रलोभनको दृश्य सेट उनी बस हुन घोषणा थियो छ कि. उजाडस्थानमा यो द्वन्द्व येशूले चरण परमेश्वरले मानिस हुन आफूलाई देखाउन दिन्छ.
It's लगभग जस्तै धेरै बाटो मियामी गर्मी यो सिजन प्रतिक्रिया. Lebron जेम्स लीग को एमभिपि छ, तर उनको टीम च्याम्पियनशिप जीत can't. उहाँले क्लिभल्याण्ड Cavaliers छोड्दा, र अन्य दुई ठूला खेलाडीहरू संग टोली. र तिनीहरू समूहमा जब उनि विशाल समारोह फेंक, घमण्ड भन्ने, सबै प्रतिभा तिनीहरूले छ किनभने, उनि जीत हुनेछ 5, 6,7- शायद पनि अधिक - एक टोली रूपमा च्याम्पियनशिप. त्यसैले सबैलाई आफ्नो घमन्ड कुरा सुने छ, they've यो सुपर टोली बारेमा सबै प्रचार सुने. मौसम सुरु अब जब तिनीहरू देखाउने र आफूलाई प्रमाणित गर्न. तपाईं you've हुन आफैलाई घोषणा यो अचम्मको सपना टोली हो? र मिडिया हेर्नुभयो र तिनीहरूले ऐतिहासिक टोली सबैलाई आशा थियो भने आफ्नो हेर्न हरेक सार्न जांच.
खैर यस्तै फेसनमा, चरण परमेश्वरको पुत्र हुन आफूलाई देखाउन येशूले लागि सेट गरिएको छ. उहाँले परमेश्वरको खुसी?
हामी बगैंचामा आदम बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको थियो, एक अद्वितीय तरिकामा God's महिमा प्रतिबिम्बित गर्न. तर त्यसपछि tempter, सर्पले हव्वालाई आउँछ र तिनीहरूलाई दुवै धोका. तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन, परमेश्वरको सत्य भन्दा सर्पले को झूट विश्वास. आदम परमेश्वरले उहाँलाई हुन बनाउनुभएको साबित भएन. हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने असफल उजाडस्थानमा इस्राएलका हेर्न. हामीले पनि धर्मशास्त्रको भर यो भन्दा र अधिक हेर्न. परमेश्वरले उहाँलाई महिमा मानिसले बनाउँछ, तर मानिसको असफल र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैन,.
त्यसैले दोस्रो आदम पहिलो गर्न सक्ने के छैन गर्न सक्षम हुनेछ? येशूले इस्राएल गर्न सक्ने के छैन गर्न सक्षम हुनेछ? शैतानको आउन र चालीस दिनको लागि येशू प्रलोभनमा गर्छ. अनि येशूले जसले हुन घोषणा भएको थियो साबित गर्छ. येशूले शो आफूलाई हाम्रो पापको हामीलाई सुरक्षित गर्न आउनुभएका परमेश्वरको पुत्र हुन र जसले हाम्रो पापरहित पूजाहारी छ. र पवित्र आत्मा भर्खरै गर्न त्यहाँ उहाँलाई पठाइयो.
अब, म परमेश्वरले आफूलाई येशू दुष्ट काम गर्ने प्रलोभनमा मतलब मेरो बिन्दु गलत समझ बैठी हुन चाहनुहुन्छ don't. त्यो सत्य हो. हामीलाई God's सार्वभौमिकताको बाहिर पर्दैन दुष्ट गर्न प्रलोभनमा भनेर तर यो बाइबल मा धेरै स्पष्ट छ. यस राडार अन्तर्गत उतर कि छैन केहि It's. त्यहाँ उहाँको निर्णयाधिकार बाहिर छ कि सृष्टिको सबै कसैले र केही छ. परमेश्वरको पूर्ण सार्वभौम छ. हाम्रो सार्वभौम परमेश्वरको अनुमति बिना हुन सक्छ कि संसारमा केही छ. यो प्रलोभनको परमेश्वरको अनुमति द्वारा हुन्छ. परमेश्वरले अनुमति र येशूले उहाँको महिमा लागि प्रयोग गर्न अभिप्रेरित.
भाइबहिनीहरू, जेम्स हामी प्रलोभनमा गर्दा हामी परमेश्वरको प्रलोभनमा छन् भनेर धेरै स्पष्ट बनाउँछ. तर परमेश्वरले परीक्षाको अनुमति छ थाह र उहाँले उहाँको महिमा लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ. परमेश्वरको त्यहाँ उहाँको शक्ति contend प्रयास र धार्मिकताको बाटो बाट तपाईं पटरी संसारमा दुष्ट शक्तिहरूको छन् भन्ने तथ्यलाई द्वारा दुःखित छ. तर ती tempters आकाश मा आफ्नो पितालाई जवाफ थाह पाउन. अनि उहाँले पनि उहाँको महिमा लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछ.
अब म वहाँ कहिले काँही हामी संसारमा परमेश्वरको महिमा कसरी साँघुरो विचार जसले हामीलाई धेरै छन्. हामी परमेश्वरको मात्र यस्तो हाम्रो छिमेकी संग सुसमाचारको साझा रूपमा सार्वजनिक आज्ञाकारी मा महिमा छ लाग्छ, वा बेघर खुवाउने, वा प्रचार. म यो मामलाहरु आज्ञाकारी मात्र प्रकारको छैन भनेर जान्न चाहन्छु. दुवै सार्वजनिक र निजी आज्ञाकारी कुरा धेरै. तपाईं ब्रह्माण्डको को परमेश्वरको महिमा गर्न को लागि क्रममा एक दर्शक हुन छैन.
जब हामी निजी छन्, र हामी पाप गर्न प्रलोभनमा छन्, परमेश्वरले हाम्रो आज्ञाकारी द्वारा महिमा छ. हामी शत्रु को मोहक झूट प्रतिरोध गर्दा परमेश्वरको महिमा छ, हाम्रो राम्रो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न. यो उहाँको भलाइ म्याग्निफाइ, र आफ्नो trustworthiness, र उहाँको शक्ति पापीहरूलाई बचाउन. त्यसैले भाइबहिनीहरू, हरेक समय परमेश्वरले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ परीक्षा गर्न, शत्रुलाई को झूट माथि उहाँलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको महिमा गर्न को लागि चरण सेट भइरहेको छ.
परमेश्वरले हामीलाई परीक्षा गर्न अनुमति मा एक उद्देश्य छ. यस अवस्थामा परमेश्वरले येशूलाई परमेश्वरको पापरहित पुत्र हुन देखाउँछ, जो शैतानको को प्रलोभनको प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्छ.
II.Weakness प्रलोभनमा मा दिनुहोस् गर्न बहाना छैन
उहाँले ती दिनमा केही खाए, र तिनीहरूलाई को अन्त मा त्यो भोक थियो.
रूपमा प्रभु येशू परीक्षा छ, उहाँले एक कमजोर र कमजोर अवस्थामा छ. पाठ येशूको लागि व्रत गरिएको स्पष्ट छ 40 दिन. ती अन्तमा 40 जो प्रकारको स्पष्ट देखिन्छ - दिन येशूले भोक थियो; आफैलाई खाना इन्कार सोच्न 40 सारा दिन.
हामी अक्सर कोरस रूपमा येशूको सोच्न मन, तर उहाँले कोरस थिएन. उहाँले परमेश्वरको मानिस थिए. त्यहाँ फरक छ. येशूले एक वास्तविक मानिस थिए. त्यसैले उहाँले थकान गर्न प्रतिरक्षा थियो, वा कमजोरी, वा भोक. यस मामला मा, उहाँले भोकाएको छ शैतानलाई एक कमजोर क्षणमा येशूको लोभ्याउँछ. अनि उहाँले विशेष क्षेत्रमा आफ्ना वर्तमान शारीरिक कमजोरी गर्न प्ले मा येशूले आक्रमण.
उहाँले एक थप तत्काल शासनको येशूले लोभ्याउँछ, खाना, उहाँले इंसाफ से अधिकार सक्ने कुराहरू संग. उहाँले इंसाफ से हुन सक्ने कुराहरू येशूले लोभ्याउँछ उहाँको, अझै येशू आफैले इनकार. येशू आफैले यहाँ देखाउँछ, सेवा हुँदैन आउनुभएका मानिसको छोरा हुन, तर सेवा गर्न.
भाइबहिनीहरू, हामी शैतानले हामीलाई कमजोरी हाम्रो समयमा आक्रमण छैन भन्ने सोच्न पर्याप्त मूर्ख हुनु हुँदैन. म भने यो हप्ता एक उद्धरण पढ्न, "अवसर एक पटक मात्र दस्तक आउँछ, तर प्रलोभनको को doorbell मा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग। "प्रलोभनमा सजिलै छोड्न छैन. प्रलोभनको रहन र तपाईं तल लगाउने हुनेछ. पछि गएर तिनीहरूले यात्रा वा कुनै पनि थप चलाउन निकै थकित प्राप्त नभएसम्म सिकार गर्ने Chase हरर चलचित्र मा खलनायक जस्तै. र शैतानले छैन यो लिन सजिलो तपाईं कमजोरी को समयमा रहेको छ. शैतानले हाम्रो शत्रु हो!
यो आफ्नो शत्रुहरू मा कमजोरी नियालेर एक सेना जस्तै हुनेछ, र तिनीहरूलाई को बन्द राख्नु गर्न निर्णय. खैर, कुनै, that's यो कसरी काम गर्छ छैन. सशस्त्र कमजोरी देख्दा, भनेर तिनीहरूलाई आक्रमण गर्न सफलता को संभावना उच्च छ किनभने लागि उत्तम समय छ. खैर त्यसैगरि, संसारको, शरीरका, र शैतानको कमजोरी को समयमा आफ्नो झूट को बन्द राख्नु छैन. वास्त्वमा, तिनीहरूले तपाईंले मात्र थप आक्रमण गर्नेछ.
त्यसैले कमजोरी उहाँको समयमा शैतानको को प्रलोभनको प्रतिरोध गर्न येशू सक्षम कस्तो थियो? साँचो It's कि शैतानको कहिल्यै पाप येशूले नेतृत्व मौका, तर येशूले उहाँलाई कसरी पराजित गरे? खैर, हामी तल खण्डमा देख्यो भने, हामी येशूको आदम के गर्नुभयो गरेनन् भनेर हेर्न थियो. येशूले परमेश्वरको वचनमा विश्वास, सैतानको वचन भन्दा. अनि येशूले पिताको इच्छा उहाँको इच्छा पेश. मा परीक्षाको समयमा, हामी मात्र willpower द्वारा प्रतिरोध गर्न प्रयास shouldn't. किनभने सत्य हामी कुनै पनि पर्याप्त छ बलिया हुन्छन्.
कमजोरी को समयमा प्रलोभनहरूको प्रतिरोध गर्ने प्रलोभनको नै अघि बाटो सुरु. अर्को हप्ता तपाईंले सामना गर्नेछ प्रलोभनहरूको प्रतिरोध यो हप्ता सुरु. तपाईंलाई के लिइरहेका छन्? के तपाईं आफूलाई भर्नु छन्? तपाईं कसरी आफ्नो विश्वास खुवाउने छन्? येशूले कमजोर थियो. तर येशूले हुनत खाली पेट थियो, उहाँले आत्मा भरिएको थियो. हामी खोज्नुपर्छ, रूपमा एफिसी प्रोत्साहन, भरिएको गर्न - र नजिकै द्वारा - परमेश्वरको आत्मा. हामी उहाँको वचन हाम्रो अनुहार हुनुपर्छ, जहाँ उहाँले दिन्छ र आफ्ना प्रतिज्ञाहरू हाम्रो विश्वास सँभाल्नुहुन्छ. अनि हामी विश्वासमा भाइबहिनीको सँगसँगै यो गर्नुपर्छ.
हाम्रो आफ्नै जीवनमा पटक हो हामी विभिन्न कारणहरूले कमजोर महसुस हुँदा. हामी थकित हुन सक्छ, वा भावनात्मक भोकमरी, वा बिरामी, या शायद यो थाह बिना कमजोर we're भन्ने हाम्रो बल यति विश्वस्त we're. तर कुनै कुरा को कमजोरी हो के, मा दिन छैन it's बहाना गर्न. यी कमजोर क्षणमा महिनामा tempter को प्रस्ताव थप आकर्षक लाग्न सक्छ, तर परमेश्वरको वचन अझै पनि सत्य हो, र सैतानको प्रलोभन अझै पनि एक झूट.
you're यौन अनैतिकता प्रलोभन परमेश्वरको भने आफैलाई सम्झाउने, "तपाईं आफ्नो आफ्नै हो, तपाईं एक दाम तिरेर किनिएका. त्यसैले आफ्नो शरीर परमेश्वरको महिमा। "अनि you're prideful हुन र स्वार्थी गर्न प्रलोभन भनेर परमेश्वरले यसो भन्नुभयो आफैलाई सम्झाउने, "आफै अरूको भलाइ तर हाम्रो हेर्न Don't।" मा कमजोरी समयमा हामीले गर्नुपर्छ, येशूले जस्तै, परमेश्वरको वचन अपनाउँछन् र उहाँलाई पालन.
III. यो Tempter पहिले नै पराजित भएको छ
हामी निरुत्साहित भइरहेको तिर दुबला सक्छ यस खण्डमा पढ्दै, सोच, "मानिस, येशूले म उहाँलाई जस्तै हुन सक्छ इच्छा त पवित्र छ,"वा, "मानिस, थप दोस्रो भन्दा पहिलो आदम जस्तै I'm. म येशूलाई भन्दा योना जस्तै हुँ। "भाइबहिनीहरू, हरेक मसीही र गैर-मसीही साँचो छ. हामी सबै येशूलाई भन्दा योना जस्तै हो.
तर हामी यहाँ पढ्न भनेर येशूको आज्ञा पालन बारेमा कुरा येशूले अर्को मानिस थिएन भन्ने छ. येशूले अर्को पनि आज्ञाकारी हुन भयो जसले हामीलाई एक थियो. कुनै, येशूले फेरि नयाँ हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्न आउनुभएका नयाँ आदम थियो. मात्र त्यो क्षण मा परमेश्वरलाई प्रसन्न येशूको आज्ञा पालन, तर येशूले हामी परमेश्वरको खुसी हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागि obeys. येशूले हामी के couldn't के गर्छ. र उहाँलाई अघि वा पछि कुनै मानिसले दिनसके कि - उहाँले आदमको पास गर्न सकिएन र इस्राएलका पारित गर्न सकिएन भनेर परीक्षण बित्दै. येशूले जहाँ हामी कुनै पनि सक्छ obeys. येशूले हामीलाई शत्रु कुनै पनि पराजित सक्छ हराइदिन्छ. र यो विशेष हार, मरुभूमिमा, शैतानको विजयी हार Luke's सुसमाचार को अन्त मा हुनेछ भनेर देखाउने थियो.
योना पनि उहाँका शत्रुहरूलाई प्रचार गर्न पनि तीतो थियो तापनि, प्रभु येशू पृथ्वीमा आउनुभयो र आफ्ना शत्रुहरूलाई लागि मृत्यु. क्रूसमा येशूले हामी प्रलोभनमा दिइएको छ कि हरेक एक समय को लागि भुक्तानी. हरेक एक समय. विश्वासीले लागि, त्यहाँ हाम्रो एक पाप येशूले भुक्तानी गरेनन् भन्ने होइन. अनि येशू चिहानबाट उठेर, पराजित पाप, मृत्यु, र शैतानको. शैतानको पराजित छ. र यदि हामी हाम्रा पापहरू देखि बारी र ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वास थियो हामी त्यो कमाएका सबै पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. येशूको आज्ञा पालन देखेर हामीलाई निरुत्साहित हुँदैन, यसले हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ.
तपाईं पाप गर्ने प्रलोभनमा पर्दा यो हप्ता, आफ्नो शत्रु पहिले नै आफ्नो प्रभु द्वारा पराजित भएको छ कि सम्झना. तपाईं आफ्नो पाप मा दिन छ don't. यो tempter पहिले नै गुमाएको छ. तपाईंको चेन भङ्ग गरिएको छ. क्रूसमा तपाईँलाई खरिद स्वतन्त्रता हिंड्न. एक पराजित शत्रु को माग गर्न Don't उपज. येशूको मृत्यु र गुलाब, हामी tempter प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने, र उहाँलाई जस्तो. हामी धेरै नै आत्माले indwelled छन् र हामी धेरै नै हतियार wield.
जब हामी प्रलोभनमा पर्दा, let's कि सम्झना परमेश्वरको दिन्छ र प्रलोभनको प्रयोग, कि कमजोरी प्रलोभनमा मा दिन बहाना छैन, अनि त्यो को tempter पहिले नै पराजित भएको छ.
हिब्रू को लेखक यो प्रलोभनको मा देखिन्छ र त्यहाँ ठूलो प्रोत्साहन पाता:
हामी हाम्रो कमजोरी समानुभूति देखाउन असमर्थ छ जो एक उच्च पुजारी छन् लागि, तर हामी हरेक तरिकामा प्रलोभनमा गरिएको छ जो एउटा छ, हामी -yet पापरहित थियो हो जस्तै. हामीलाई त निर्धक्क अनुग्रहको सिंहासनको दृष्टिकोण गरौं, ताकि हामी कृपा प्राप्त र अनुग्रह आवश्यकता हाम्रो समय मा हामीलाई मदत गर्न पाउन सक्छ। (हिब्रू 4:15-16)
प्रभु येशूले हामीलाई समानुभूति गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले हामी प्रलोभनमा पर्दा रूपमा परीक्षा गरिएको छ, तर उहाँले कहिल्यै पनि उहाँलाई सही पूजाहारी बनाउने दिनुभयो. त्यसैले हामी निर्धक्क भई उहाँको सिंहासन दृष्टिकोण सक्नुहुन्छ, कृपा र अनुग्रह लागि pleading. Let's अब उहाँलाई जाने.
Jem973 • अक्टोबर 29, 2013 मा 2:26 बजे • जवाफ
तपाईं शिक्षण लागि धेरै धेरै धन्यवाद ! यो हाम्रा परमेश्वर हामीले सामना हरेक प्रलोभन कति थाह थाहा त ठूलो छ ! यसमा दिनुभयो बिना येशूको परीक्षा गरिएको छ भनेर थाह त ठूलो छ, र शैतानको पराजित भनेर गर्न !!
तपाईं प्रोत्साहन लागि धेरै धेरै धन्यवाद ! परमेश्वरले आफ्नो सेवकाई र आफ्नो परिवार आशीर्वाद.
(मेरो अंग्रेजी को लागि माफ गर, म फ्रेन्च हो)